Shacabka Kenya oo loo sheegay in Sheikh Shariif taageersan yahay hawlgalkooda Militari ee ay ka wadaan gudaha Soomaaliya | MultiethnicSociety
← Presidents talk tough
Marauder Shirkad Batrool oo cusub oo reer Faroole ka iibiyeen dhul baaxaddiisu dhan tahay tahay 60,000 oo sqkm. →
Shacabka Kenya oo loo sheegay in Sheikh Shariif taageersan yahay hawlgalkooda Militari ee ay ka wadaan gudaha Soomaaliya
Madaxweynaah DFKMG Sheikh Shariif ayaa Arbacadii Nov 16 waxa uu gaarey magaalada Nairobi, halkaas oo uu kula kulmay madaxweynayaasha Kenya iyo Uganda, shir albaabadu u xirnaayeen. Kulankaasi markii uu dhammaaday waxaa saxaafadda hor yimid Kibaki iyo Musaveni si ay isula sawiraan Shariif-ka, laakiin aan saxaafadda la hadlin. Kaddibna waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka Arrimaha dibadda ee Kenya Watangula (hoos ka daawo).
Waxaana markaas ay saxaafadda Kenya ku xeel dheeraadeen in joogitaanka Sheikh Shariif ee kulanka ay meesha ka saareyso diidamadiisii uu hore u diidey hawlgalka Kenya. Weli Sheikh Shariif shacabka Soomaaliyeed uma caddayn waxa bedeley mowqifka hore ee uu ka qaatay diidmada ciidanka Kenya.
Oct 25 ayey ahayd markii Sheikh Shariif ka soo horjeestey ciidanka Kenya ee galay gudaha Soomaaliya, intii ka dambeysey wax hadal ah lagama maqal. (Halkan ka Dhegeyso hadalkii Sheikh Shariif).
Dhanka kale Afhayeenka Militariga Kenya Maj Chirchir ayaa sheegay in aan laga afduubin 3 askari oo ka tirsan militaigooda ku sugan gudaha Soomaaliya.
Maj Chirchir, Afhayeenka Militariga Kenya
Dowlada Kenya oo sheegtay inay diyaarisay ciidammo ay ku xoojinayso ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM
Khamiis, November 17, 2011 — Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya, Moses Watangula ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaariyay ciidammo ay ku xoojinayaan ciidamada Midowga Afrika (AMISOM) ee ka howlgalaya Soomaaliya.
Kenya waxay howgal milateri oo iskeed ah ku qaaday dalka Soomaaliya bishii lasoo dhaafay iyadoo ciidamadeeda ka talaabisay soohdinta labada dal u dhexeysa kaddib markii ay ku eedeysay Xarakada Al-shabaab afduubyo kala gooni-gooni ah oo laga geystay dalkooda.
Balse Xarakada Al-shabaab ayaa ku gacan sayrtay inay ku lug leedahay eedeymaha ku aaddan inay afduubyo ka geysatay gudaha dalka Kenya, iyadoo ku hanjabtay inay ka aargudan doonto Kenya.
Ciidamada Midowga Afrika (AMISOM) ee ku sugan Somalia ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 9,000 kuwaasoo ka socda dalalka Uganda iyo Burundi, balse waxay horay u codsadeen in tiradooda la kordhiyo si ay ammaanka Muqdisho u adkeeyaan.
Mr. Wetangula ayaa u sheegay inay diyaariyeen dhowr kun oo askari, kuwaasoo ay ugu talogaleen inay la howgalaan cidiamada Uganda, Burundi oo Muqdisho kawada howlgallo lagu soo celinayo nabadda Soomaaliya.
“Tani ma ahan wax dhib badan,” ayuu yiri Wantangula oo la hadlayay barnaamijka Network Africa ee ka baxa BBC-da. Isagoo intaas ku daray in dalkiisa ay ka go’an tahay inuu gacan ka geysto nabadeynta kusoo celinta dalka ay dariska yihiin.
Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo shalay oo Arbaco ay Nairobi wadahadallo ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif iyo dhiggiisa Kenya Mwai Kibaki iyagoo isku raacay in si wadajir ah loola dagaalamo Al-shabaab.
Posted on November 17, 2011, in Truth to Power. Bookmark the permalink.	Leave a comment.